အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ဝက်ကုန်းဘောင် နဲ့ အချိုပွဲ
တလက်စတည်း ပြောချင်တာက တရုတ်ရိုးရာဟင်းတွေက နေဆင်းသက်လာတဲ့ ကုန်းဘောင် ကို မူလ ဘူတ ကတော့ (ကုန်းဘောင်ကျီးသင်း) လို့ခေါ်ပါတယ် ကုန်း ဆိုတာကတော့ (နန်းတွင်) လို့ အဓိပပ္ဗါယ် ရပြီးတော့ ( ပေါဝ်) မြည်သံစွဲဘောင် ကတော့ (ရတနာ) လို့ အဓိပ္ဗါယ် ရပါတယ် အဲ့တော့ ကုန်းဘောင်ကျီးသင်း ဆိုတာ နန်းတွင်ရတနာပေါ့ ကြက်သား ဟင်းလျာပေါ့ တရုတ်တွေက ဟင်းကြော်တဲ့ အခါ ပြင်ဆင်တဲ့ အခါ ပွဲလှဖို့ အရောင်စုံအောင် လုပ်တတ်တဲ့ အတွက် ဒီ နန်းတွင်ရတနာ ကြက်သားဟင်းလျာ ကို ကြော်လှော်ချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာ အဝါ အတွက် မျစ်နုလေးတွေ၊ ပြောင်းဖူးကလေးလေး (ဘေဘီကွန်)၊ ငရုတ်ပွအဝါ၊ ပန်းဂေါ်ဖီ နောက် အနီရောင်အတွက် မုန်လာဥနီ သို့ ခါကြက်ဥ ငရုတ်ပွ နီ နောက် အစိမ်းရောင်အတွက်ကတော့ ဘုိုစားပဲ၊ ငရုတ်ပွ စိမ်း၊ ဘရိုကိုလီ စတာတွေထဲက ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ထည့်ပါ။ အဲ့တာတွေ မှ မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ ကြက်သွန်မိတ်လေးတွေ ထည့်ကြော်လဲရပါတယ်။ တရုတ်ဟင်းဆိုရင် စေ့ ရှန်း ဝိတ် ဆိုတဲ့ အချက် ၃ ချက်ပါရပါမယ်တဲ့ စေ့ ဆိုတာ က အရောင် ကိုပြောတာပါ ရှန်း က အနံ့ ကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့ ဝိတ် ဆိုတာ က (ဝိတ်တက် အဲလေ) အရသာ ကို ပြောတာပါ။ အဲ့အချက် သုံးချက်ပါမှ ဟင်းလျာကောင်း လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်တဲ့။ တီက တော့ ဟုတ်တာတွေ ကော မဟုတ်တာတွေ ကော ဖောလျော လိုက်ပြီနော် ချင့်ချိန်ပြီး ယုံသင့်တာကိုပဲ ယုံဖို့ က စာဘတ်သူ ကိစ္စ.....
ပြီးရင်တော့ ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်း ခုနက လုံးထားတဲ့ ဝက်သားတွေ ကို ထည့်ကြော်ပါ ခဏလေး ကြော်ပေးပြီးရင် နောက်ဆုံးပုံထဲက အတိုင်း သကြား နည်းနည်း နဲ့ ခရုဆီ ထည့်လိုက်ပါ နှံ့အောင် မွှေ ပေးပြီး ခဏ နေရင် အိုးချလို့ ရပါပြီ....
Posted by တီချမ်း at 1:06 PM
အန်တီချမ်း April 20, 2011 at 1:10 PM
Thet April 20, 2011 at 1:15 PM
Wanna eat it! It looks good!
jr April 24, 2011 at 5:00 PM
အား .. အချိုပွဲတွေ ပိုကြိုက်တယ်ဗျ။
ဂျူက ၀က်သားမစားတော့ ကြက်သားနဲ့ချက်ကြည့်ဦးမယ်။ တခါမှ ကြက်ကုန်းဘောင် မချက်ဖူးဘူး။ ကျေးစ်။